Wafdi uu hoggaaminayo M/weyne Farmaajo oo ku wajahan Dooxa. – XAMAR POST
Wafdi uu hoggaaminayo M/weyne Farmaajo oo ku wajahan Dooxa.
By Mohamed Abdi On Mar 5, 2022
Wafdi uu hoggaaminayo Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta oo Sabti ah safar ugu ambabaxayo Magaalada Dooxa ee dalka Qatar.
Safarka Madaxweynaha iyo Wafdigiisa waxaa uu salka ku hayaa in maalinta Berrito ah uu dalkaas kulan kula qaato Amiirka Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, iyadoo dhinacyada ay ka wada hadli doonaan xiriirka labada dal iyo sidii loo taageeri lahaa loona horumarin lahaa.
Tani ayaa ka dambeysa, iyadoo lagu wado in la soo gabagabeeyo doorashada Xubnaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya, maadama la doortay ku dhawaad 180 xildhibaan oo ka mid ah 275-ka xubnood.
Sidoo kale, dalka Qatar waxaa lagu tiriyaa in ay miisaan culus ku yeelatay guushii madaxtinimo ee Madaxweyne Farmaajo uu ka gaaray doorashadii madaxweynaha ee 2017-kii, taas oo uu kaga adkaaday Xasan Sheekh Maxamuud.
Dhinaca kale, qoraal kooban ay soo saartay Wakaalada Wararka Qatar xalay ayaa lagu shaacisay in safar uu maalinta berri madaxweyne Farmaajo ku tagayo Doha, Axadana uu Qasriga Madaxtooyada kula kulmayo Qatar Sheikh Tamim.
Galmudug oo soo saartay Guddiyada soo xulaya kuraas taala Gaalkacyo.
Xukuumadda Ruushka oo xabad joojin ku dhawaaqday.